ओली–प्रचण्डबिच विषय मिल्यो मन मिलेन - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
ओली–प्रचण्डबिच विषय मिल्यो मन मिलेन
Published On : ११ बैशाख २०७५, मंगलवार ११:५२
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुन लागेको एकता प्रक्रियाका बारेमा शीर्ष नेताकै धारणा सुन्ने हो भने कुनै पनि विवादित विषय बाँकी छैनन्, तर एकता हुन सकेको छैन । एकता घोषणा हुने भनिएको दिन पनि टरिसक्यो, अब नभनिएको दिनमा एकता हुन्छ भनेर नेताहरुले कार्यकर्तालाई सम्झाउने काम जारी राखेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने एकताका लागि अब जुत्ता तयार भइसक्यो, खुट्टा ताछेर पनि मिलाएर जुत्ता लगाउनैपर्छ । अर्को विकल्प छैन । अब दुनियाँको ताकतले एकता प्रक्रिया रोकिँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै शब्दमा भन्ने हो भने अब केपी ओली र प्रचण्डले नचाहे पनि एकता भएरै छाड्छ ।
दुवै शीर्ष नेताले नेकपाको स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीका दिन भएको कार्यक्रममा व्यक्त धारणा हुन् यी । यति भन्दैगर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कतिसम्म विश्वासको संकट छ भन्ने कुरा सोही कार्यक्रमको सुरुवातमै देखियो ।
कार्यकर्ता पार्टी एकता ‘भए हुन्छ नभए हुँदैन’ भन्ने तहसम्मको व्यवहारमा उत्रिए । शीर्ष नेताले नै एकआपसमा कटाक्ष गरे । त्यसले अझै पनि मुल विषय भन्दा विश्वासकै संकट रहेको देखाउँछ ।
माओवादी केन्द्रकै एक नेताले पनि शीर्ष नेतामा विश्वास बन्ने हो भने सबै कुरा मिलिसकेको बताउँछन् ।